Askari ka tirsanaan jiray booliska oo xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu tuhmay argagixisanimo – The Voice of Northeastern Kenya
Askari ka tirsanaan jiray booliska oo xabsiga loo taxaabay kadib markii lagu tuhmay argagixisanimo
Ciidamada ammaanka ee ku sugan magaalada Mombasa ee gobolka xeebta dalka ayaa xabsiga u taxaabay askari horay uga tirsanaan jiray booliska sida Milatariga u tababaran ee loo yaqaanno GSU-da, kaas oo lagu tuhunsanyahay in uu xiriir la leeyahay dhaqdhaqaaqyada loogu yeero argagixisada.
Ninkaan ayaa waxa uu baxsad ahaa dhawaanahaan, isagoo ay booliskana si weyn u doon doonayeen.
Bishii la soo dhaafay ayey ahayd markii ay ciidanka booliska gacanta ku dhigeen 3 qori oo noocoodu yahay AK47, 178 xabadood oo rasaas ah iyo 9 qasnadood oo loo isticmaalo qoriga AK47-ka, kuwaas oo dhammaantood laga helay guriga uu daganaa askarigaasi hore oo ku yaalla xaafadda Githurai 45 ee magaalada tan Nairobi.
Agaasimaha ciidamada dambi baarista CID-da ee xaafadda Ruiru David Chebii ayaa sheegay in sarkaalka hore ee ka tirsanaa laanta GSU-da uu xiligaas howlgalku dhacayay ka baxsaday gacanta booliska.
Ninkaan eedeysanaha ah ee hadda lagu xiray Mombasa ayaa magaciisa lagu sheegay Eric Ngethe Kanyigi, waxaana uu shaqada ciidanka ka tagay sanadkii 2014-ki.
Askarigaasi ayaa markii hore booliska ku biiray sanadkii 2012-ki, waxaana uu ka tirsanaa muddo 2 sanadood ah, sida laga soo xigtay saraakiisha ciidamada ammaanka.
Waxaa la aaminsanyahay in uu ka mid yahay dadka u hoggaansamay fikirka Al Shabab, mid ka mid ah bartilmaameedadiisa uu damacsanaa in uu weerarka ka fuliyo ayaana lagu sheegay xarunta dhexe ee ciidamada GSU-da ee xaafadda Ruiru, in kastoo isku daygaasi ay booliska fashiliyeen.
← Wasaaradda arrimaha gudaha oo ku dhawaaqday in maalinta Isniinta ay tahay Fasax Qaran si loogu dabaal dago ciidul adxa
Booliska Siaya oo ugaarsanaya macalin baxsad ah oo fara xumeeyay carruur arday ah →